अन्ततः भोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने, भर्खरै यस्तो आयो निर्णय – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/अन्ततः भोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने, भर्खरै यस्तो आयो निर्णय
अन्ततः भोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने, भर्खरै यस्तो आयो निर्णय
काठमाडौं । भोलिदेखि फेरि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ ।बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले असोज ९ गते रातीदेखि १४ गते रातीसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले लकडाउनको घोषणा गरेको हो ।
लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नगरपालिकाले वडाध्यक्ष र वडाबासीलाई समेत जानकारी गराई प्रचारप्रसार गर्ने बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारुले बताए । उनले कोरोनाको जोखिम बढेको कारणले पुनः लकडाउन गरीएको बताए ।
त्यसैगरी नगरपालिकाले लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरुलाई अंशुवर्मा मावि जयनगरमा राख्ने र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बारबर्दिया नगरपालिकामा असोज १० गते बिहान ५ बजेदेखि असोज १४ गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
नगरस्तरीय कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बारबर्दियाको अनुरोधमा निषेधाज्ञा जारी गरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले बताए ।
गत मंगलबार बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष ३९ वर्षीय सुर्यबहादुर थारुको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको थियो ।
अब अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने, एक्कासी आयो यस्तो निर्णय !
आजदेखि देशभर लकडाउन ब्यापक कडा – अब पास भएका सबारी पनि चलाउन नपाइने !!!
भदौ २५ देखि नियमित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ! यस्तो छ आज बसेको बैठकको निर्णय
भर्खरै आयो यस्तो निर्णय : भोलिदेखि बजार नखुल्ने, पसल तथा व्यवसाय पनि बन्द हुने !